साफ च्याम्पियनसिपः नेपालविरुद्ध भारतको लगातार गोल ! - Everest Dainik - News from Nepal
साफ च्याम्पियनसिपः नेपालविरुद्ध भारतको लगातार गोल !
काठमाडौं, चैत ८ । महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालविरुद्ध भारतले ३-१ ले अग्रता बनाएको छ । पहिलो हाफमा १-१ को बराबरीमा रहेको खेलमा भारतले दोस्रो हाफको ६२औं र ७१ औं मिनेटमा गोल गर्दै भारतले ३ १ गोलको अग्रता बनाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस साफ फुटबल च्याम्पियनसिपः उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दै [LIVE]
पहिलो हाफमै अग्रता लिएको भारतसँगको खेलमा नेपालकी सावित्रा भण्डारीले बराबरीमा ल्याएकी थिइन् । विराटनगरस्थित सहिद मैदानमा जारी खेलको २६औं मिनेटमा डालिमा छिब्बरले करिव ३५ यार्डबाट फ्रिकिकमा सुन्दर गोल गरेपछि नेपाल खेलमा पछि परेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल विरुद्ध भारतको पहिलो गोल (LIVE)